Ogbenyeghi ihe nye Coronavirus: Nkwado na ngwugwu | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulEnweghị ego a na-apụghị ịgagharị agagharị na Coronavirus: ịdị n'otu na nchịkọta
Enweghị ego a na-apụghị ịgagharị agagharị na Coronavirus: ịdị n'otu na nchịkọta
25 / 03 / 2020 34 Istanbul, General, Mpaghara Marmara, Turkey
Soldị n'otu na-enweghị atụ na nkwakọ ngwaahịa megide coronavirus
Onye isi oche ndị na - ahụ maka ndị ọrụ na - ahụ maka ọnụnọ (OMÜD) Onye isi Buğra Sükan kwuru, "Anyị na - agabiga ụbọchị mgbe anyị kwesịrị ịdị n'otu n'ihi nhụjuanya coronavirus ụwa (COVID-19) emetụtala mba anyị. N'ime usoro a, a na-eji kaadiboodu (Igbe, ngwugwu), nke mpaghara anyị mepụtara, na-eji ya na nkwakọ, ụgbọ njem na ichekwa ihe ndị dị mkpa ngwa ngwa dịka ụlọ ọrụ, nri, nhicha, ngwaahịa ịdị ọcha na akụrụngwa ọgwụ, nke dị mkpa maka ọha mmadụ. Dị ka mpaghara, anyị na-eji ike anyị niile arụ ọrụ ka usoro a ghara ịkwụsị. "
Onye isi oche OMÜD Buğra Sükan kwuru, "Ihe ntiwapụ nke COVID-19 anyị nọ na ya abụrụla nsogbu zuru ụwa ọnụ. Anyị ga-adị ndụ site na ịrụ ọrụ dị ka nwa amaala, site na ịme akụkụ anyị, yana yana nchịkọta akụ na ụba nke steeti anyị wetara. N'oge a, ọ dị ezigbo mkpa ijigide usoro mmekọrịta ọha na eze ka ị na-alụ ọgụ nje. Anyị onwe anyị, dịka mpaghara ahụ, na-ahụ mkpa ọhụụ kachasị mkpa nke ọha mmadụ dịka akụkụ nke mgba mba anyị megide nsogbu ahụ ugbu a. N'ime usoro a siri ike, a ga-enwerịrị ihe ndị dị mkpa dị ka nri, ọgwụ, nhicha na ntinye ọgwụ, n'enweghị nsogbu ọ bụla. Dịka ngalaba kaadiboodu, anyị na-aga n’ihu n’ọrụ anyị site n’ime ka ụlọ ọrụ anyị na-emeghe, ka anyị na-arụ ọrụ na nkwakọ ngwaahịa, nkwakọ ngwaahịa na nchekwa nke ngwaahịa ndị a. Anyị na-agba mbọ ịgba mbọ hụ na egbochighị mkpa ihe mberede. Ka anyị na-arụ ọrụ mmepụta anyị, anyị na-echekwa nchekwa na ịdị ọcha nke ndị ọrụ anyị n'etiti ihe ndị kacha mkpa, anyị na-emebi nje na akụrụngwa anyị, anyị na-azụ ndị ọrụ anyị ma na-enyocha ahụike ha mgbe niile. Na mgbakwunye, n'ikwekọ na okirikiri nke Ngalaba Ahụike anyị, anyị na-ekwe ka ndị ọrụ anyị nwere ọnọdụ adịghị ala ma na-agụgharị ikike nrụpụta anyị. ”
Ihe kachasị dị ọcha na ngwugwu gburugburu ebe obibi: Kaadi Koodu
N'ịrụtụ aka na nhọrọ nkwakọ ngwaahịa taa, ebe ịdị ọcha dị mkpa karịa, Sükan kwuru, “Kaadị ahụ mara mma bụ ihe kachasị ọcha na gburugburu ebe obibi na ngwugwu ngwaahịa iji chebe megide ọrịa coronavirus na-emetụta ụwa. corrugated kaadiboodu emepụtara site na mmeghari isi mmalite na recyclable ọdịdị na-eburu otu onye n'ime mmadụ atọ ọ bụla na ngwaahịa na Turkey. Ọnụego a dị elu karịa na ọgwụ, nri na ịdị ọcha. Na mgbakwunye, ọ na-enye usoro nkwakọ ngwaahịa nchekwa na ịdị ọcha, ma n'ihi na enwere ike ịsacha ya na akụrụngwa bụ akwụkwọ. N'ihi na ọ na-ekpughere ya okpomoku nke 200 Celsius C ọ dịkarịa ala ugboro atọ, otu oge n'oge mmepụta akwụkwọ, ugboro abụọ n'oge mmepụta corrugated. Ka emechara ya, a na-etinye nkwakọ ngwaahịa ahụ ka ọ dị elu karịa 200 Celsius C n'oge a na-emegharị ya. N'ihi oke okpomọkụ na ngwa uzuoku, microorganisms adịghị adị ndụ. Usoro a anyị enwetala ọzọ gosipụtara mkpa ọ dị ọcha kaadi akpọnwụ ahụrụ arụ. ”
Asị mba ee e, Mba Kabataş Ọkpụkpụ aghọọ ụzọ
Enweghị okporo ụzọ na-enweghị Trabzon
Ụgbọ njem ngwa ngwa na Antalya bụ ihe (Video)
Minista Arslan, 1915 Anyị ahụla Bridgeak Canakkale
BTS siri ike na-azaghachi okwu ndị ụkọchukwu na-ekwu "Ịgba àmà abụghị ihe kwesịrị maz
Onye ikpe kwuru na e nweghị usoro a na - akpọ Değil "
Mgbochi megide Coronavirus ..! Oge Njem Akpọghị Njikọ malitere na BursaRay
Deputy Prime Minista İsmail Ertuğdan Haydarpaşa nkwado maka mmekorita otu
Ogige okporo ụzọ Haydarpasa na ịdị n'otu
Nkwupụta TCDD Development na Nkwupụta Nlekọta Mgbakwunye na TCDD
1 nwere ike "ụbọchị ọrụ na ịdị n'otu" ụbọchị obi ụtọ
PROPAKING PRACKING PRODUCTION NA MARKETING INC.
Oran, Ogugu nke oma nke ulo di na tebulu e debere na tebulu
Ngwaahịa ndị na-eguzogide ọgwụ na ọkụ na egwu na mpaghara okporo ígwè